Ogaden News Agency (ONA) – Lataliye Sare oo Iska Casilay Maamulka Donald Trump.
Lataliye Sare oo Iska Casilay Maamulka Donald Trump.
Posted by ONA Admin	/ February 21, 2017
Wakaaladaha Wararka ee Maraykanka ayaa tibaaxaya in La taliye sare oo ka tirsanaa Golaha Amniga Qaranka ee Maraykanka (NSC) uu Donald Trump shaqada ka caydhiyay kadib markii uu ka hor yimid aragtidiisa siyaasadeed ee ku aadan wadamada Laatin America. Waxaa sidaas TV ga CNN-ta u xaqiijiyey afhayeen u hadashey aqalka cad ee Maraykanka looga arimiyo.
Craig Deare ayaa dib ugu laabtey shaqadiisi hore ee National Defense University. Craig Deare ayaa dhaliilay khudbad uu todobaadkii hore jeediyey Trump oo ku aadaneyd siyaasadda ay kula dhaqmayaan dalalka ku yaala Koonfurta Ameerika iyo Meksiko, waxaana uu sheegay in maamulka Aqalka cad uu yahay mid aan shaqayneyn, isla markaana aan wax talo ah waydiin Golaha Amniga Qaranka.
Waa masuulkii 2aad ee xilka iska casila, waxaana ka horeeyey lataliyihii Amniga Qaranka ee Trump M. Flynn ee Trump ka dalbadey in uu xilka iska casilo kadib markii lagu helay in aanu ahayn daacad.
Todobaadkii hore ayey ahayd markii shaqada laga caydhiyay Shermichael Singleton, waxaana uu ka shaqeynaayey Wasaaradda guriyeynta iyo hormarinta magaalooyinka, sababta loo cayriyey ayaa ah maqaal uu qorey ka hor doorashada Maraykanka oo uu wax uga sheegay Donald Trump.
Trump ayaa lagu eedeeynayaa in uusan dulqaad u lahayn qofkasta oo ka aragti duwan, haba ahaado qof isaga la shaqeynayey oo maamulkiisa kamid ah.